Love mirror | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Creative Writing » Love mirror	13
Posted by marblecommet on Jun 22, 2012 in Creative Writing, My Dear Diary, Poetry | 13 comments
ပင်လယ်ပြင်ကို Principal axis လုပ်
မင်းရဲ့ . . .
ငါ့ . . .နှလုံးသားမှာ
ဆုံချက် (Focus) ဖြစ်ပါစ . . .။
သီဝရီ . . .အချိုးမညီဘူး
(Virtual image) တစ်ခုသာ
ရင်မှာ ဒဏ်ရာဖြစ်ခဲ့ပေါ့ . . .။ ။
ဟဲဟဲ….ဆယ်တန်းတုန်းက light အခန်းသင်ရတဲ့အခါ ကြေးမုံခုံးခွက်တွေသင်ရတော့ ဒီကဗျာအတွေးလေးဝင်လာတယ်။ ပြီးတော့ Physics ဆရာက အရိုက်ကြမ်းတယ်.။
ကျနော်ကလည်း ခပ်တုံးတုံးကောင်ဆိုတော့ Concave / Convex ကို ဆြာရှင်းပြတာ တော်တော်နဲ့မပေါက်ဘူး ….ပေါက်ချင်းပေါက်ရော အတန်းထဲမှာကဗျာစာအုပ်ထုတ်ကြရော ဒီကဗျာကထပေါက်သွားရော…..
အဲဒါနဲ့ အနော်လည်း လက်မောင်းမှာဆြာပေးတဲ့တပ်ကြပ်ကြီး ရာထူးရခဲ့ဘူးတယ် နည်းတဲ့ကြိမ်လုံးဟုတ်ဘူးဗျ…
အခုတလော စာရေးလို့မရတာနဲ့ ရွာထဲလည်း သိပ်မရောက်ဖြစ်တာနဲ့
စာအုပ်ဟောင်းလေး ပြန်ရှာတွေ့တာနဲ့ ရွာသားတွေကို စိတ်ညစ်အောင်လုပ်လိုက်တော့မယ်….
marblecommet marblecommet has written 40 post in this blog.
ငါ့မှာသာ....တိမ်တွေကို စီးပြီး မောပန်းနေရ.....
View all posts by marblecommet →	Blog
kyeemite says: ဂွတ်တယ်ဗျာ..
သီဝရီ . . .အချိုးမညီဘူး”….အမှန်ဘဲ ကိုကမ်းကြီးရေ…
မောင်ပေ says: ၁၀တန်း ရူပဗေဒနဲ့ပတ်သက်ပြီး မှတ်မိတာ တစ်ခုဘဲရှိတယ်
mirror ကိုဖြတ် တည့်တည့်ထွက်… တဲ့
အရက်ကိုဖျက် waterမှတ်…. ပေါ့ဗျား။
mamanoyar says: (Virtual image) တစ်ခုသာ
surmi says: ပြန်သတိယပါရဲ့  ကျောင်းပြေးခဲ့ တာလေးတွေ
ရှင်းသန့် နွယ် says: ဘ၀ဆိုတာ…
Ma Ei says: ဆယ်တန်းမှာ ရေးတဲ့ကဗျာလေး
Khaing Khaing says: ကိုကမ်းရဲ့ကဗျာလေးကိုအားပေးသွားပါတယ် ……..အားလုံးအဆင်ပြေအနည်ထိုင်သွားပီလားကိုကမ်း …… ကိုကမ်းဆံပင်ရောင်းထားတဲ့ငွေနဲ့ ၀မ်းသာရွှေကျောင်းမှာ ကျောင်းဆောက်တဲ့ဟာကိုလှူထားပါတယ် ဆံပင် ရောင်းရငွေက တစ်သောင်းရပါတယ်ကိုကမ်း …… ဖြတ်ပိုင်းကို စကန်ဖတ်ပြီး တစ်နေ့တော့မေးကနေ ပို့ပေးလိုက်ပါမယ် ……
marblecommet says: လွဲမှားနေသေးတဲ့ ကိုကိုမိုက်…
ဒီကဗျာတောင် အသက် (15)နှစ်လောက်
Nyein Nyein says: ကိုကမ်းရေ ကဗျာလေးကမိုက်တယ်နော်။
mocho says: ပိုစ့် နဲ့ မဆိုင် တာ ပြောလိုက် အုံးမယ်၊ ဆံပင် ရောင်းတာ ၁ သောင်း တောင် ရတယ် ဆိုတော့ မနည်းဘူးပဲ ။ ကို ကမ်း ကို ပန်းတနော် ဓာတ်ပုံ တွေ ထဲမှာ ဂတုံး ဆံပင်နဲ့ တွေ့ ဖူးတာ ဆိုတော့ အဲဒီ မတိုင် ခင် က ဆံပင် ရှည် နဲ့ ပေါ့။
marblecommet says: မှန်ပါ့
အခုတော့ ကီတုန်း မဟုတ်တော့ပါဘူး
သားဦး၊မြေးဦး says: Concave,Convex ကို lens နဲ့ mirror ရောဖတ်လိုက်ပါ။လည်သွားတာပေါ့။
ဟီးးး ကဗျာ အရေးကောင်းလို့ ကြိမ်လုံးကြီးကြီး ရဖူးသွားပေမယ့် ဘဝမှာ အမှတ်
pan pan says: သက်ငြိမ် နွေးထွေးမှုနဲ့
ဒီတခါတော့ ဖိုးကပ်ကပ် မကပ်ကပ် မရရအောင်ကပ်ပါစေအူးလေးရေ
တော်ထှာ၊ သများသားသ္မီးတွေများ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel reply
Comments By Postအဆိပ်ခတ်အဖွဲ့ကြီး မိလာပြီဗျ… ဘာလုပ်သင့်လဲပြောပြ… သတ်ပစ်…. သတ်ပစ် - GaviaGirl - uncle gyiယုံလား? - uncle gyi - KZအတ္တဆန် - Ma Ma - ကထူးဆန်းလူပါး ပုလင်းကွဲရှ - Ma Ma - KZမော်ဒယ်လ် တဲ့လားကွယ် - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - Mr. MarGaပိတောက်ပန်းတွေကြူကြူဝေတို့အညာမြေပန်းတွေ - TNA - မောင် ပေ``ကျန်းမာရေးအတွက် အရက် နဲ့ အုန်းသီး(အုန်းရည်) အသုံးဝင်ပုံ´´ - KZ - TNAကဘာကျော်ကြီးရဲ့ ကဘာကျော်ကဘာ .. အဲ .. ကဗျာ - TNA - မောင် ပေရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - KZ - TNAကျီးအာသီးနှင့်တူသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ - TNA - TNAကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေက ရတဲ့ အတွေး - KZ - Mr. MarGaသူ - ရွှေ ကြည် - KZနောက်တစ်ခါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါ လာပြန်ပြီဟေ့ - Shwe Ei - Shwe Eiမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - အရီးခင်လတ် - KZဖိုင်နယ်ပွဲ မှာ ပိုင်ရှယ်ဆွဲ (၂၅၇၄) - မောင် ပေ - မဟာရာဇာ အံစာတုံးမျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ အသစ်အဟောင်းပြဿနာ - KZ - ဘဲဥလုပ်စားခံလိုက်ရတဲ့ ...... မဟာဆန်.... - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - ဘဲဥကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သန္ဓေသားအတွက် အဟာရ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - ဘဲဥကံဇာတ်ဆရာ စီမံလေသမျှ - Foreign Resident - parlayar 46မင်္ဂလာပါ - ဘဲဥ - jujumaရပ်ကွက်မှသည် နိုင်ငံဆီသို. - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - ရွှေတိုက်စိုးEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77772 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70521 Kyats )naywoonni (67212 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66703 Kyats )cobra (62183 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (58176 Kyats )MaMa (57650 Kyats )Top Posts & Pagesမော်ဒယ်လ် တဲ့လားကွယ်